Manchester United Oo Qaadaysa Tallaabadii Ay Real Madrid, Juventus iyo Atletico Ugu Garaaci Lahayd Saxeexa Christian Eriksen - Gool24.Net
Manchester United Oo Qaadaysa Tallaabadii Ay Real Madrid, Juventus iyo Atletico Ugu Garaaci Lahayd Saxeexa Christian Eriksen
Manchester United ayaa bisha foodda inagu soo haysa ee January qaadi doonta tallaabo ay hore ugu soconayso sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd laacibka khadka dhexe uga ciyaara Tottenham ee Christian Eriksen.
27 jirka reer Denmark waxa dhamaadka xili ciyaareedka dhici doona heshiiskii uu kula jiray Tottenham, waxaanu si xor ah ugu biiri doonaa kooxda uu doonayo.
Tottenham oo isku dayday inay ku qanciso inuu heshiis cusub u saxeexo ayuu ka diiday, waxaana la rumaysan yahay inay jiraan kooxo waaweyn oo uu isha ku hayo amaba ugu yaraan ay wax dhex mareen.
Sida uu qoray wargeyska Mirror, Manchester United ayaa rajaynaysa in ay noqon doonto kooxda uu Eriksen u ciyaari doono xili ciyaareedka dambe, si ay taasi ugu suurtogashana waxay u baahan tahay in bisha January ay bixiso lacag ay siinayso laacibka iyo wakiilkiisa.
Warku waxa uu intaa ku daray in Spurs ay filaysay in laga yaabo in maskaxda ciyaartoygu isbeddesho oo uu kusii sugnaado White Hart, laakiin guul-darradii Arbacadii kasoo gaadhay Old Trafford ayaa waxay dishay rajadii uu Jose Mourinho ka qabay in xili ciyaareedka soo socda ay kooxdu ka ciyaarto Champions League.
Manchester United oo iyaduna u muuqata in aanay ka mid noqonin doonin kooxaha ka ciyaari doona Champions League fasal ciyaareedka dambe ayaa ay ku adkaan doontaa in Eriksen ay hesho maadaama uu doonayo in uu ka ciyaaro Champions League.
Kubbad-sameeyahan hore ugu ciyaari jiray Ajax ayey wararku sheegayaan in uu doonayo in waqtiga ka hadhay cimrigiisa ciyaareed uu tago horyaal kale oo uu khibrad iyo waayo aragnimo ka korodhsado, taas oo fursad siinaysa kooxaha Real Madrid, Juventus iyo Atletico Madrid oo dhamaantood danaynaya saxeexa laacibkan.